About Us - I-China Ningbo Jietong Electronics Co, Ltd.
Ningbo Jietong Swtich itholakala eNgobo, eChina. Ngo-Ephreli, 1994 futhi igxile ekuhlinzekeni ukuhlanzeka okuhle kakhulu nezinsizakalo kumakhasimende kagesi asekhaya nangaphesheya.
Ifektri itholakala ETDZ, Ningbo. Imikhiqizo yethu ikhava: i-rocker switch, switch switch, switch switch switch kanye nezimoto switch.
Sigxile ekuhlinzekeni ukushintshwa okuqeqeshiwe nokunokwethenjelwa, ukubambisana kakhulu namakhasimende ethu emhlabeni jikelele, kusuka lapho sithola khona ulwazi oluyigugu ngezinhlobonhlobo zokuthengiselana. Ukukhishwa konyaka kwenziwa cishe ngezigidi ezingama-50.
, imikhiqizo yethu ihambisana namazinga we-RoHS futhi ithwala i-UL,, TuV, ENEC, CE, ne-KEMA, ukuvunywa kokuphepha.
Jietong Electronic iyaziqhenya ngokunikeza uhla olubanzi kakhulu nolubanzi kakhulu lwezinto ezisezingeni lomkhiqizo ngentengo efinyelelekayo. Isekelwa uJieong Electronic service owaziwa ngokusekelwa kwezobuchwepheshe, amakhasimende angaqiniseka ukuthi izidingo zawo zomkhiqizo zizokwanelisa noma ngabe yisiphi isicelo. Wonke amakhasimende athola insiza yekilasi le-frst noma ngabe lingakanani usayizi woku-oda kwawo ukuze aqhube ibhizinisi lawo kahle.
Izithuthi Hazard Shintsha , Izithuthi Inkinobho Ishintsha , I-Sub-Miniature Guqula Tjhugulula, Izithuthi Rocker Shintsha , Izithuthi Guquguqula Ishintsha , I-Sub-Miniature Rocker Ne-Lever Handle switch,